​हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट मात्रै साढे तीन हजार मेट्रिक टन स्याउ निर्यात
मुस्ताङ । स्याउको राजधानी भनेर चिनिने हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट यो याममा तीन हजार ६ सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यो वर्ष चार हजार ७..
​सरकारले अर्थतन्त्रलाई असफल हुन दिने छैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएकाले त्यसप्रति इमान्दार हुन सरकारले आग्रह गरेको छ । चौथो राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार..
नाकाबन्दीले अर्वौंको आलु बिकेन, कृषक चिन्तित
भक्तपुर । भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएपछि जिल्लामा उत्पादित आलु बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा आलु बिक्री हुन् छाडेको छ । जिल्लाको सुडाल, ताँथली, सिपाडोल, वागेश्वरीलगायतका क्षेत्रमा उत्पादित आलु बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा..
​नाकाबन्दीबाट कृषिमा मात्रै दैनिक ८३ करोड नोक्सान
काठमाडौं । भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट मुलुकको कृषि क्षेत्रमा दैनिक ८३ करोड रूपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण इन्धन तथा ग्यासको चरम अभाव हुँदा दैनिक रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम..
घरेलु तथा साना उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रीको जोड
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास नभएसम्म मुलुकमा ठुला उद्योगको विकास सम्भव नरहेको बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वरको सोमवार..
‘माछापालनबाट लखपति बने पल्टु’
कञ्चनपुर । कृषि पेसा अङ्गालेका पल्टु चौधरीसँग एक दशकअघि ट्र्याक्टर खरिद गर्दा लागेको बैंकको २२ लाख ऋण थियो । पेसाप्रतिको लगाव र लगनशील भएर लागेका कारण कञ्चनपुरको झलारीपिपलाडी नगरपालिका– १..
भारतीय नाकाबन्दीले कृषि क्षेत्रमा मात्रै ६३ अर्बको क्षति
काठमाडौं । भारतले गरेको नाकाबन्दीले कृषि क्षेत्रमा ६३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको क्षति भइसकेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा सुरज पोखरेलले..
गोदावरी फूलको मेला जावलाखेलमा सुरु
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा फ्लोेरिकल्चर एशोसिएसन नेपालको आयोजनामा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी बिहिबारदेखि ललितपुरको जावलाखेलमा सुरु भएको छ । गोदावरी फूलको व्यवसायिक विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले ९..
​कात्तिके उखु खेतीतर्फ किसान आकर्षित
बर्दिवास । एकसाथ बहुबाली लगाउन पाइने भएपछि महोत्तरीका किसान कात्तिके उखु खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।कात्तिकमा रोपिने उखु बालीसँगै तेलहन, दलहन र तरकारीसमेत लगाउन सकिने भएपछि किसानहरु कात्तिके उखु खेतीतर्फ..
​दुई-दुई वटा विषयमा डिग्री गरेका राई किबी खेतीमा
​खोटाङ । खोटाङको दोर्पाचिउरीडाँडा–८ का शुभचन्द्र राईले किबीको बिरुवा बिक्री गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गर्नु भएको छ । तीन वर्षदेखि किबीको व्यवसायिक नर्सरी सुरु गर्नुभएका राईले वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी..
सुक्ने रोगले उखु कृषकको लगानी डुबायो
कञ्चनपुर । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखुमा सुक्ने रोग लागेपछि कञ्चनपुरका उखु कृषकको लगानी जोखिममा परेको छ ।कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेल्डाँडी, बेलौरी, पुनर्बासलगायतका क्षेत्रमा उखुमा सुक्ने रोग देखिएको छ ।..
​खाद्य संस्थानमा दसैंका लागि खसी-बोका र च्याङ्ग्राको बिक्री सुरु, मुल्य कति?
काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानले आज शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा खसीबोका र भेडा च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण सुरु गर्दैछ । मनाङबाट ल्याईएको ७ सय च्याङ्ग्रा र हेटौंडामा खरिद भएका ५ सय जीउँदो खसीबोकाको..
​कृषि बिमा सफल पार्न यसको लागत घटाइनुपर्ने
काठमाडौँ । यही असोज १७ र १८ गते काठमाडौंमा कृषि मन्त्रालय, सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति तथा अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा “कृषि बिमामा भएको असल अभ्यास” विषयक..
​चिनियाँ भेडा च्याँङ्ग्राको मूल्य बढ्दा समस्या
मुगु । नेपालीको महान् चाड दसैँ, तिहार र छठ पर्व नजिकिरहँदा यसपालि मुगुमा चिनियाँ खसी नआउने भएको छ । विगतका वर्षमा स्थानीय खसीभन्दा सस्तोमा पाइँदा नेपाली उपभोक्ता चिनियाँ खसीतिर आकर्षित हुने..
​मनाङको आलुले धान्दै छ, पहाडको माग
मनाङ । कुनैबेला आफ्ना आफन्तलाई कोशेलीको रुपमा पठाइने आलु हिजोआज बिक्री हुन थालेकोमा मनाङका बासिन्दाहरु चकित परेका छन् । आफुलाई चाहिने आलु राखेर अरु आलु जिल्लामा कार्यरत कर्मचारी, पाहुना र..
​अनुदान प्राप्त गर्ने पशुपालकलाई अनिवार्य बिमा
कञ्चनपुर । अनुदान प्राप्त गरी व्यवसायीक पशुपालनको कार्यमा संलग्नका लागि पशु सेवा कार्यालय कञ्चनपुरले अनिवार्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। व्यवसायीक पशुपालनमा संलग्नका पशुहरु महामारीजन्य प्रकोप, रोग व्याधि र भवितव्यबाट हुने..
​बङ्गुर र बाख्रापालन गरेर आत्मनिर्भर बन्दै महिला
पर्वत । पर्वतको दक्षिणी भेगका पाँच गाविसका महिला बाख्रा र बङ्गुरपालन गरेर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । पर्वतको शालिग्राम, रानीपानी, बर्राचौर, बाच्छा र पाङ्गराङ्ग गाविसका सबै घरधुरीका महिलाले बाख्रा र बङ्गुरपालन..
​दूध निर्यात गर्न सरकारसँग अनुमति माग
काठमाडौं । मुलुकमा उत्पादित दूध भारत निर्यात गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्सँग अनुमति मागेको छ । दैनिक ३० हजार लिटर दूध भारत निर्यात गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने..
अर्गानिक चिया तीनजुरेको तेस्रो मुलुकमा निर्यात
इलाम । अर्गानिक चिया उत्पादन गरिरहेको तीनजुरे चिया सहकारी संस्थाका चिया तेस्रो मुलुक निर्यात भएको छ । विभिन्न देशका चियासँग सम्बन्धित उद्योगी तथा व्यापारीहरूले कारखानामै पुगेर चियाको गुणस्तर मापन गरेपछि पाँच..
​एक व्यक्तिको भागमा ४ सय २० ओटा रुखपर्ने, विश्वमा रुखको संख्या ३० खर्ब
काठमाडौं । विश्वमा रुखको संख्या ३० खर्बमाथि रहेको नयाँ आँकडा प्रकाशमा आएको छ । अघिल्लोपटकको सबैभन्दा यथार्थ नजिक दाबी गरिएको संख्याभन्दा यो ८ गुणा बढी हो । बेलायतको यल विश्वविद्यालयका थोमस क्राउथरको..
‘रेनी सिजनमा’ पर्याप्त उत्पादन घट्दा किसान निराश
इलाम । यो वर्ष चियाका लागि मौसम अनुकूल मानिए पनि उत्पादन उत्साहजनक हुन सकेको छैन । चियाको मुख्य उत्पादन हुने ‘रेनी सिजनमा’ पर्याप्त उत्पादन नहुँदा किसान निराश छन् । यो याममा..
भेडा बेचेर वार्षिक पाँच लाख आम्दानी
म्याग्दी । उत्तरी म्याग्दीको लेकाली क्षेत्रमा भेडापालन गरेका कृषकले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । खोप्रा र खयरलेक क्षेत्रमा भेडापालन गर्दै आएका पाउद्वारका कृषकले भेडा बिक्रीबाटै वार्षिक ५ लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी..
काठमाडौं । नेपालजस्तो गरिब देशका जनताका लागि संसारकै धनी मुलुक अमेरिका जान पाउनु भाग्य मान्ने सोच अहिले पनि छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि ममा पनि त्यस्तै सोच पलायो । त्यतिबेला..
​माछापालनबाटै वार्षिक बाइस लाखसम्म आम्दानी
दाङ । दाङको लमही नगरपालिका– ५ टिकुलीगढका अम्मरबहादुर तामाङले माछापालनबाट वार्षिक २२ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। आठ बिगाहा जग्गा क्षेत्रफलमा आठवटा पोखरी निर्माण गरेर उनले व्यावसायिक रुपमामाछापालन गरिरहेका छन्।..
​शिक्षण पेसा छाडेर कुखुरा फार्म सञ्चालन, “घरखर्च कटाएर मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत”
खोटाङ । खोटाङका एक व्यक्तिले शिक्षण पेसा छाडेर व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका छन्। दिक्तेल नगरपालिका–३ का सुवास जोशीले लामो समयदेखि गर्दै आएको शिक्षण पेसा छाडेर कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका हुन्।..
गाईपालनमा किसान सक्रिय भएपछि दूध उत्पादन बढ्यो
चितवन । चितवनमा विगत तीन वर्षदेखि दूध उत्पादन क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । व्यावसायिक गाईपालनमा किसान सक्रिय भएकाले दूध उत्पादनमा समेत वृद्धि हुँदै गएको हो। जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख..
​भुइँ स्याउको व्यावसायिक खेती फस्टाउँदैैै
बागलुङ । बहुउपयोगी भुइँ स्याउको माग बढ्न थालेपछि बागलुङका किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ लागेका छन् । थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएपछि भुइँ स्याउको व्यावसायिक खेतीतर्फ लागेका ह्ुन् । केही अघिसम्म..
​पाल्पा जिल्लामा कृषि सहकारीको सङ्ख्या ५६
पाल्पा । किसानको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ५६ पुगेका छन् । आर्थिक हैसियत बढाउने उद्देश्यले पाल्पामा गत आव २०७१र७२ मा डिभिजन सहकारी कार्यालयमा १५ सहकारी..
​डेढ अर्ब बराबरको अलैँची निर्यात
पाँचथर । आव २०७१/०७२ मा यहाँबाट करिब एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा उत्पादन भएको ६२७ मेटन अलैँची प्रतिटन..
यूनिलिभरको एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मुनाफा
काठमाडौ । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले अर्ब बढी नाफा कमाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा कम्पनीले एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीको नाफा ९०..
Results 344: You are at page 8 of 12